Man United Oo Si Rafaad Badani Ku Jiro Ugu Soo Baxday Afar Dhamaadka Europa Leaque-ga, Marcos Rojo Oo Garoonka Laga Dhex Qaaday Iyo Ibrahimovic Oo Dhaawac Xumi Soo Gaadhay. - Laacib.net
Man United Oo Si Rafaad Badani Ku Jiro Ugu Soo Baxday Afar Dhamaadka Europa Leaque-ga, Marcos Rojo Oo Garoonka Laga Dhex Qaaday Iyo Ibrahimovic Oo Dhaawac Xumi Soo Gaadhay.
Manchester United ayaa si rafaad badani ku dheehan yahay ugu soo baxday afar dhamaadka Europa Leaque-ga kadib markii ay waqti dheeri ah u baahatay si ay uga soo gudubto kulankii lugta labaad ee Old Traffrod ay ku soo dhawaysay kooxda Anderlecht.
Manchester United ayaa kulankan ku wayday Marcos Rojo oo kulankan dhawac looga dhex qaaday iyo Ibrahimovic oo uu dhaawac jiliba si xun uga soo gaadhay laakiin Mkhiyaryan iyo Marcus Rashford ayaa kala dhaliyay labada gool ee ay Man United guusha ku gaadhay inkasta oo kooxda martida ahayd ee Anderlecht ay tartankan baaqi ku sii ahayd ilaa daqiiqadii 107 aad laga soo gaadhayay. Red Devils ayaa afar dhamadka Europa Leaque-ga ugu soo baxday wadar labada kulan oo 3:2 ah.
KAYDKA:De Gea, Rooney, Martial, Blind, Young, Herrera, Fellaini.
KAYDKA:Deschacht, Bruno, Nuytinck, Capel, Boeckx, Thelin, Stanciu.
Kooxaha Manchester United ee Anderlecht ayaa markiiba bilaabay in ay goolal raadiyaan waxayna koox kastaaba ka shaqaynaysay sidii ay ugu soo bixi lahayd afar dhamaadka Europa Leaque-ga. Mourinho ayaa shan isbadla ku sameeyay shaxdii uu guusha kaga gaadhay Chelsea wuxuuna doonayay in kooxdiisu ay ku sii dhawaato koobka Europa Leaque-ga.
DAQIIQADII 10 AAD GOOOOOOOOOOOL!! Henrikh Mkhitaryan oo jecel in uu goolal ka dhaliyo tartanka Europa Leaque-ga ayaa kooxdiisa Red Devils u dhaliyay goolka furitaanka kadib markii uu gool caawin ka helay Marcus Rashford waxayna ciyaartu noqotay 1:0 ay Man United hogaanka ciyaarta kula wareegtay. Goolkan ayaa ahaa goolkiii shanaad ee uu Mkhitaryan ka dhaliyay Europa Leaque-ga waana goolal ka badan inta uu Premier Leaque-ga ka dhaliyay xili ciyaareedkan.
DAQIIQADII 13 AAD Man United ayaa ku dhawaatay in ay hesho goolkeeda labaad kadib markii uu Lingard uu fursad fiican helay laakiin darbo uu goolka ku bartilmaameedsaday ayuu si fiican iskaga badbaadiyay goolhaye Rubben.
DAQIIQADII 23 AAD Man United ayay dhibaato dhawac soo gaadhay waxaana ciyaarta laga dhex qaaday Marcos Rojo kaas oo awoodi waayay in uu garoonka ka dhex baxo waxaana lagu soo badalay Daley Blind. Iyada oo Smalling iyo Jones ay wali dhawac ku maqan yihiin ayuu dhaawaca Rojo u ahaa mid walwal badan.
DAQIIQADII 32 AAD GOOOOOOOOOOOL!! Kooxda martida ahayd ee Anderlecht ayaa ciyaarta dib guu soo laabtay kadib markii uu Sofiane Hanni uu dhaliyay goolka ay sida wayn ugu baahnaayeen waxaana caawinta goolkan sameeyay Łukasz Teodorczyk waxayna ciyaartu noqotay barbaro 1:1 ah.
Inkasta oo ay jireen fursado fiican oo ay labada kooxood sameeyeen oo ay goolal ku dhalin kareen ayayna awoodin in ay wax goolal kale ah ay kala dhalyaan waxaana lagu kala nastay barbaro 1:1 ah taas oo isku darka labada kulan ka dhigtay isla barbaro 2:2 ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay isla markiiba Man United heshay fursado cajiib ah iyada oo Luka Shaw uu kubbad halis badan u dhiibay Lingard laakiin waxa uu Lingard awoodi waayay in uu dhamaystiro kubbad uu kooxdiisa gool ugu dhalin karyay.
DAQIIQADII 60 AAD Mourinho ayaa u adkaysan waayay in kooxdiisu ayna helin goolashii uu ka doonayay wuxuuna ciyaarta ka saaray Jesse Lingard oo fursado fiican qasaariyay wuxuuna kaydka uga yeedhay Marouane Fellaini.
Ciyaarta ayaa noqotay mid furan oo ay koox kastaaba heli kartay goolka labaad ee ay ku guulaysan karta balse waqtiga ayaa labada kooxoodba ka ordayay iyada oo xalaadu sii adkaatay. Manchester United ayaa bilawday in ay ka walwalasho in gool looga hormaro iyada oo Old Traffrod marti loogu yahay.
DAQIIQADII 69 AAD SIDAYNA GOOL U NOQON!!! Manchester United ayaa heshay fursad cajiib ah oo ay goolka labaad ku heli kartay kadib markii uu Rashfrod ka faa’iidaystay qalad uu sameeyay Appiah laakiin waxa uu u baahnaa kaliya in uu garaaco goolhaye Ruben taas oo uu sameeyay laakiin haddana ma rumaysan kartid in aanu gool ku dhalin.
Wax kasta oo garoonka Old Traffrod ka dhacay waxay labada kooxood awoodi waayeen in ay wax goolal kale ah kala dhaliyaan taas oo keentay in 90 kii daqiiqo ee waqtigii rasmiga ahaa ee ciyaartu uu ku dhamaado barbaro 1:1 ah waana isla natiijadii kulankii hore waxaana qasab noqotay in 30 daqiiqo oo dheeri ah ciyaarta lagu daro.
Laakiin warka ugu xun ayaa ahaa in dhamaadkii daqiiqado dheeri ahaa oo lagu daray uu dhawac soo gaadhay Zlatan Ibrahimović kaas oo si xun dhulka ugu dhacay wuxuuna awoodi waayay in uu ciyaarta sii wadan karo waxaana kaydka looga yeedhay Anthony Martial. Daawayn kadib Ibrahimovic ayaa isaga oo dhutinaya garoonka ka baxay.
Manchester United ayaa sii laba jibaartay dagaalka ay ugu jiray in ay u soo baxdo afar dhamaadka Europa Leaque-ga laakiin Mourinho ayaa si wayn uga cadhaysnaa in kooxdiisu ay waqti dheeri ah la gaadhay Anderlecht laakiin waxaaba kaga cadho badnaa in Rojo iyo Ibrahimovic ay dhaawacmeen.
Fursad abuurista Manchester United ayaa ahayd mid joogto ah laakiin haddaba waxaa meesha ka maqnaa qaabkii ay goolal ku dhalin lahaayeen waxayna kooxda martida ahayd Anderlecht markan doonaysay in ugu yaraan ciyaarta gaadhsiin karto rekoodhayaal.
DAQIIQADII 101 AAD GOOO??? Pogba ayaa shabaqa soo taabtay laakiin Fellaini ayaa ka hor qalad ku soo galay Spajic waxayna markan Man United qarka u saarnayd in ay hesho goolka inkaarta ku noqday balse wali waxaa si adag u ciyaaraysay Anderlecht oo geesinimo badan soo bandhigaysay.
DAQIIQADII 107 AAD GOOOOOOOOOOOOOL!! Marcus Rashford ayaa ugu danbayn gartay dhinaca uu goolka Anderlecht ka xigay wuxuuna kooxdiisa u dhaliyay goolka ay waqtiga dheer soo raadinaysay isaga oo waliba gool caawin ka helay Marouane Fellaini oo wax badan Man United ku soo kordhiyay waxayna ciyaartu noqotay 2:1 ay Red Devils hogaanka ciyaarta ku soo ceshatay.
Paul Pogba ayaa saddex daqiiqo kadib ku dhawaaday in uu ciyaarta dilo laakiin goolhaye Ruben ayaa ka beeniyay fursad uu ku dhalin kari lahaa goolka ay Man United natiijada ku ilaashan kartay. Kooxda martida ahayd ee Anderlecht ayay markan xaaladu kuxumaatay.
DAQIIQADII 116 Man United ayuu soo foodsaaray walwal ah in ay Anderlecht hesho goolka labaad kaas oo Red Devils tartankan ka reebi lahaa kadib markii uu Acheampong uu helay fursad cajiib ah laakiin waxa uu awoodi waayay in uu shabaqa United gaadho waxaana kubbada badbaadiyay Romero.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2:1 ay Man United waqtigii dheeriga ahaa ugu garaacday Anderlecht oo xaalada ku adkaysay waxayna ugu danbayn Red Devils si rafaad badani ku jiro ay ku xaqiijisatay afar dhamaadka Europa Leaque-ga.